DHIS NAFTAADA - DHISMAYAASHA
Sare - qol loogu talagalay keydinta miraha, khudradda, badeecooyinka kala duwan iyo kaydka.
Marka la eego heerka qoyaanka iyo heerkulka taageerada, heerkulku wuxuu u adeegaa nooc ka mid ah "qaboojiye" badeecadaha, wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad muddo dheer ku hayso.
Maqasyadu badanaa lagama maarmaanka u yahay guryaha dalka iyo guryaha. Cabbirka weyn ee qolka ayaa kuu oggolaanaya inaad kaydiso kaydad badan oo ballaadhan mugga, iyada oo aan walwal laga qabin ammaankooda.
Xayawaan ka samaysan polycarbonate oo lagu dhisay gacmihiisa ayaa si farxad leh u jecel isha.
Halkan ka ogow sida loo sameeyo quudinta shimbiraha.
Gacmaha iska xayeysiisay: http://rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroim-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-bystroi-i-nedorogo.html
Noocyo madoow ah
Ka hor inta aan la dhisin dhismaha, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo nooca Maqsin ee ku haboon dhismaha goobta.
Underground (ama earthen) maqaasiinka - ugu caansan. Tani waa qol ku yaal gebi ahaan dhulka hoostiisa. Waxaa ka mid ah maqaasiinka garoomada, goobaha iyo guryaha.
Maqaasiinka guriga waxaa badanaa la yiraahdaa subfield. Guryaha dhulka hoostiisa ah waxaa lagu dhisay meelo dhulka hoostiisa ku yaal meel fog oo dusha sare leh, ama dhul ballaaran.
Underground - tani waa maqaasiinka daboolan. Guryaha noocan oo kale ah ayaa la diyaarinayaa halka biyaha heerka hoose uu ku dhow yahay dusha sare ama meelo aan ku dhoweyn meella sare.
Ground - Tani ma aha meel qarsoodi ah, waxay u badan tahay sida qolka nooca aan la aasin oo loogu talagalay cunto kaydinta. Meelahaas oo kale, qoyaan iyo heerkulka hooseeya (had iyo jeer dabiiciga ah) waa in la joogteeyaa waxaana badanaa loo isticmaalaa qaybaha warshadaha iyo beeraha.
Xulashada goob loogu talagalay dhismaha Maqsin
Haddii aad rabto inaad ka samayso maqaasiinka guri guri ama garaash, ka dibna booska horay loo doortay. Waxa keliya oo ay tahay in la ogaado heerka biyaha dhulka iyo ku habboonaanta goobta dhismaha dhismaha Maqsin.
Maqaasiinka guriga dhexdiisa lama dhisi karo. Maqaasiinka hoose waxaad ku dari kartaa dhismaha hoose, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ogaatid waxa qoyaanka ku jira iyo sida qabowgu u yahay.
Heerkulka ugu wanaagsan ee kaydinta khudaarta waa laga bilaabo 2 illaa 60 ° C oo ka badan eber. Iyo qoyaanka ugu fiican waa 75-85%.
Haddii guruubku uu buuxiyo shuruudahan - waxaa si ammaan ah loo isticmaali karaa miiska. Heerkulka ka sarreeya xadka waa wax aan la aqbali karin, sababtoo ah khudaarta ayaa si deg deg ah uga sii dari doonta, heerkulka ka hooseeya xadka, khudaarta ayaa xakameyn kara, taas oo sidoo kale si xun u saameeya tayada.
Maqaasi hoose ee dhulka ugu habboon ee dhulka iyo qalalan qallalan. Si loo go'aamiyo heerka biyaha dhulka ayaa noqon kara adiga. Waxaa jira habab badan oo tan:
Heerka dhulka hoostiisa waxaa lagu go'aamiyaa heerka biyaha ee ceelasha ugu dhow.
Ceel yar oo qoto dheer oo qulqulaya heerarka dhulka ayaa sidoo kale muujinaya.
Haddii ay jiraan waxyaabo badan oo cagaaran oo ku yaala goobta, dabaylaha, sedge ama dhirta oo ku kora carrada biyaha oo gudubaya, biyaha dhulka ku dhow waa dusha sare.
Haddii aadan ku qanacsanayn qaababka go'aanka, waa inaad wacdaa geologist si aad u ogaato dhulka.
Waxaa fiican in la go'aamiyo heerarka biyaha ee gu'ga ama dayrta, maadaama ay kuwani yihiin waqtiyo baraf ah ama roob, taas oo ah, heerka biyaha waqtigan waa kan ugu sarreeya. Tani waxaa la sameeyaa si loo go'aamiyo heerarkooda oo keliya, laakiin sidoo kale heerka fatahaada goobta inta lagu jiro muddooyinka biyaha sii kordhaya.
Ogow bogga nooca faylka loogu baahan yahay wadooyinka beerta.
Raspberry, beeritaanka dayrta: //rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/aromatnaya-malina-vybor-sortov-i-osobennosti-vyrashhivaniya.html
Doorashada qalabka dhismaha
Qalabka dhismaha Maqsin waxaa lagu doortaa nooca uu yahay.
Guryaha qoryaha loo yaqaan "Wooden logs", dhismayaasha lebiska ama dhismaha ayaa ku habboon dhulka hoostiisa. Xulashada walxaha loogu talagalay maadadaas waa mid aan xaddidnayn shuruudaha, maaddaama jawiga gudaha lagu hayn doono farsamo ahaan.
Meelaha yar yar ee dhulka hoostiisa ah ee ku habboon isticmaalka dhowr nooc oo qalab ah.
Tusaale ahaan, qoryaha, lebbiska ama xayawaanka xayawaanka ayaa ku haboon qaybta dhulka, badanaaba lebbiska ama la taaban karo ee qaybta soo-noqoshada.
Meelaha dhulka hoostiisa waxaa jira dhowr shuruudood oo ay tahay in ay u hogaansamaan qalabka. Wood waxaa loo isticmaalaa si aad u dhif ah, sida baararka caadiga ah iyo boorsada ayaa isku rogi doona oo qasaya qoyaankan.
Qoryaha waa in uu ahaadaa dhulka, loola dhaqmo xeryahooda gaarka ah iyo daawooyinka antiseptics. Waa arrin aad u adag oo qaali ah, sidaas darteed qalab kale ayaa loo isticmaalaa marar badan.
Kuwa ugu caansan waa leben iyo la taaban karo. Tilmaamo waxaa loo isticmaalaa gubasho (waa wax aan la yareynin burburinta), iyo la taaban karo waxaa loo isticmaali karaa barkad, oo samee derbiyada monolithic. Marar dhuuban ee birta ayaa loo isticmaalaa maaddo.
Markaad isticmaasho qolalka guriga sida miis, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaar ka mid ah sifooyinka. Meelaha dhaadheer waa mid aad u haboon, sababtoo ah uma baahnid inaad meel u tagto kaydka.
Waa ku filan inaad hoos ugu dhaadhacdo guriga hoose. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato in isticmaalka subfloors hubinayaan muuqaalka jiirarka, kuwaas oo ay yeelan doonaan inay la dagaalamaan. Sidoo kale, Maqsin waa in laga saaro qolalka ugu waaweyn ee ku nool, waa wax la jecel yahay in uu ku jiray veranda, jikada ama waddada. Sidoo kale dhulka hoostiisa waa inuu ahaadaa mid si fiican u qalajisa.
Nidaamka hawada ayaa inta badan lagu bixiyaa dhulka hoostiisa xitaa inta lagu jiro dhismaha guriga, laakiin haddii aysan jirin, markaa waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in alaabada iyo derbiyada hoose ee la isku dabooli doono caaryada.
Dhismaha dhulka hoostiisa iyo dhulka hoostiisa ee dhulka hoostiisa ayaa loo baahan yahay marka hore in la qodo god. Meelaha dhulka hoostiisa ayaa ceelku wuxuu noqon doonaa mid ballaaran oo qoto dheer, tan Maqaasiinka laftiisa wuxuu noqon doonaa gebi ahaan dhulka hoostiisa.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in qodidda godadka aan la samayn doonin marka loo eego qiyaasaha saxda ah ee dhismaha mustaqbalka, laakiin wax badan oo badan, maadaama aad u baahan tahay qalab lagaga dhigayo dabaqa iyo darbiyada.
Marka ceelasha la qodo, waxaad dhisi kartaa aasaas. Waxaa habboon in la gashado barkinta badbaadada ee jejebka, burburka, xabbado lebbiska ama dhagax oo ka buuxi qashinka. Tani waxay abuurtaa lakab oo qolka ka ilaalisa qoyaan iyo biyo badan.
Haddii derbiyada laga sameeyo lumber ama leben, markaa waxay u baahnaan doontaa in la sii xoojiyo xoojinta.
Haddii derbiyadu yihiin kuwo la taaban karo, ka dibna waxaa jira 2 nooc oo dhismo ah - mid ka mid ah dhismayaasha dhoobada ah, ama rakibidda derbiyada dhagxaanta ee monolithic by shidaal. Xaaladda kowaad, qaybaha la taaban karo ee cabbirka la diyaariyay ayaa si fudud loo dhigaa, xoojiyaa oo la dejiyaa iyadoo la marayo wareegga darbiga. Marka la abuuro derbi monolithic ah, geedi socodku wuxuu la mid yahay dejinta aasaaska monolithic ee dhismaha.
Qalabaynta geedaha waxaa la geliyaa, mesh mesh ama midab birta ayaa lagu dhejiyaa gudaha si loo xoojiyo derbiga, ka dibna la taaban karo. Derbiyada monolithic noocan ah waa ikhtiyaarka ugu xasilloon uguna kalsoonaan karo, maadaama Maqsin laga ilaalin doono qoyaanka.
Ka dib markii la rakibo derbiyada iyo dabaqa, waxaad kuxiran kartaa saqafka iyo qorraxdu, haddii ay tahay qolka nasashada. Dhagaxyada waa la baari karaa oo la nadiifin karaa. Waxaad gelin kartaa sanduuqyada ama roogaga.
Qodobbada lagu beero pears fallaadh boggayaga internetka.
Waxyaabaha qaaska ah ee johannesörka ee xagaaga: //rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod/obrezka-chereshni-letom-pervaya-posleduyushhaya-isozavershayushhaya.html
Qodobbada muhiimka ah ee dhismaha
Markaad dhisayso maqaasiinka, waa muhiim inaadan ilaawin hawo-qaadashada. Qalabaynta qolka, waa ku filan in lagu rakibo hal ama laba tuubbo oo dibedda u baxaya.
Tiglaha waxaa lagu dari karaa taageerayaasha korantada, haddii riixidu ay yar tahay ama haddii qolku uu ku fiican yahay cabbirka.
Wixii derbiyada biyaha lagu ilaaliyo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho dufan ama qalabka biyaha lagu nadiifiyo, sida qalabka saqafka.
Sidoo kale, maqaasiinka waa in lagu qalabeeyaa koronto, haddii loo baahdo.
Qiimaha dhismaha madoow
Kharashku wuxuu ku xirnaan doonaa waxyaabo badan oo badan. First of dhan, waa qiimaha qalabka la soo xulay, taas oo ku xidhan cabbirka Maqsin.
Dabcan, maqaasiinka yar ee qoyaanka yar ee qooyska yar ayaa ka jaban dukaanka khudradda weyn.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo qiimaha dhamaystirka iyo walxaha la jiido, nidaamka biyaha lagu nadiifiyo iyo habka hawada. Waxay noqon doontaa mid ka raqiisan inaad ka dhisto madoow intii aad ku wacdey koox gaar ah oo dhisme.
Maqasyada xaddidan waa kuwo ka qaalisan kuwa lebiska. Meelaha la taaban karo ayaa ka jaban marka la dhejinayo derbi adag oo la mid ah. Ku rakibida qalabka korontada iyo qalabka dhismaha ee dharka iyo sawir qaadayaasha ayaa sidoo kale ku jira qiimaha.